Mbido EGO AFRICAN FOOTBALL Emmanuel Adebayor Child Story Plus Akwụsịghị Echiche Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a hardcore striker onye kacha mara amara na aha njirimara; "Rosemary osisi“. Anyị Emmanuel Adebayor Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe omume site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke onye ọkpụkpọ Arsenal mbụ gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ mmekọrịta ya, nsogbu ezinụlọ yana ndị ọzọ na OFF na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya nwere mana mana ole na ole tụlere Emmanuel Adebayor's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Emmanuel Adebayor Child Story - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Emmanuel Adebayor mụrụ na 26th ụbọchị nke February 1984 na Lome, Togo. Amuru ya nna ya, Shadrach Adebayo Adeyi na nne ya, Hajia Adebayor.
Adebayor apụghị ije ije na afọ anọ nke ndụ ya. Nne ya gbasiri ike site n'inwe Adebayor dara ogbenye gburugburu West Africa na-achọ ọgwụgwọ maka nsogbu nke ụkwụ ya.
Adebayor kwuziri banyere 'ọrụ ebube' ya, sị,
"... Anọ m na chọọchị na-agbadata na, n'ihe dị ka elekere itoolu ma ọ bụ elekere iri N'ụtụtụ Sọnde, anụrụ m ụmụaka na-egwu egwu n'èzí. Na mberede, otu onye na-agba bọl n'ime ụka. Na onye mbụ na-ebili ma na-agba ọsọ bụ me becawere m chọrọ inweta bọọlụ ahụ. Nke a bụ mgbe m hụrụ ọrụ ebube m. Otu ụbọchị achọpụtara m na Chukwu kara akara m ịbụ ndị ngba ama ama
Adebayor debara aha na obodo OC Agaza na Togo ebe o biliri n'ogo. Metz Scout, Francis De Taddeo hụrụ ya n'oge asọmpi ntorobịa ma mesịa kpọga ya France. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Hugo Lloris Childhood Story Plus Ihe omuma ihe omuma
Emmanuel Adebayor mmekọrịta mmekọrịta:
Ndị na-agba ọsọ Togo na Tottenham Hotspur n'ihu Emmanuel Adebayor na-ejikarị eme ka ndụ ya na nzuzo, na-amaghị ọtụtụ ihe banyere nwunye ya aha ya bụ Charity Adebayor. Naanị ya na-aga ihe omume profaịlụ dị elu na ya na Europe.
Adebayor na Charity nwere nwa nwanyị ha kpọrọ Kendra Adebayor. Amuru ya na June 2010.
Emmanuel Adebayor na nwa ya nwanyị, Kendra na-ele anya na foto dị n'okpuru ebe a.
Kendra na 2013 mere ememe ncheta ụbọchị nke atọ ya n'ụdị oke. Nna ya Millionaire ga-etinye aka na ya kacha mma.
Emmanuel Adebayor Ndụ Ezinụlọ:
Nna Adebayor si n'otu obere obodo a na-akpọ Igbaye na 'Odo Otin Local Government
Mpaghara Osun, Nigeria. Nna ya Shadrack Adebayor Adeyi nwụrụ na 2005, na-ahapụ nne ya, Hajia Adebayor. Nne ya si n'obodo dị nso na-akpọ Ekusa.
Emmanuel nwere ụmụnne nwoke atọ na ụmụnne nwanyị atọ. Ọ kacha nọrọ nwanne ya nwanyị nso, Iyabo. Aha nwanne ya nwoke nke nta bụ Rotimi Adebayor. Sistersmụnna nwanyị abụọ fọdụrụnụ bụ Lucia Adebayor (nwanne), Maggie Adebayor (nwanne). Peter Adebayor bụ nwanne ya nwoke nwụrụ anwụ.
Emmanuel Adebayor Okwu Ezinụlọ:
N'oge na-adịbeghị anya, Adebayor dere ogologo ederede na nkọwa zuru ezu na ibe Facebook ya iji kpughee ihe mgbu onwe ya na ọgba aghara ezinụlọ ya nwere n'oge gara aga, na-ekpughe ókè ezinụlọ ya gbalịrị iji ya.
Ogologo post ya na Facebook peeji nke kọwara nsogbu ezinụlọ ya.
O dere na Facebook ibe ya:
“Oké osimiri, Edebewo m akụkọ ndị a ogologo oge mana echere m taa na ọ bara uru isoro gị kerịta ụfọdụ n'ime ha. Ọ bụ eziokwu na a ga-edozi okwu ezinụlọ n'ime ma ọ bụghị n'ihu ọha mana m na-eme nke a ka olile anya ezinụlọ niile ga-esi mụta ihe na nke m. Ọzọkwa, buru n'uche na ọ dịghị nke a bụ banyere ego.
Mgbe m dị afọ 17, na ụgwọ ọrụ mbụ m dị ka ndị ịgba ụkwụ, m wuru ụlọ maka ezinụlọ m ma jide n'aka na ha dị mma. Dika ị maara, amatara m ihe ngosi nke Player nke Year na 2008.
Enwekwara m nne m na-aga n'ihu na-ekele ya maka ihe niile. N'otu afọ ahụ, m kpọgara ya London maka ọgwụ dị iche iche nlele.
WheA mụrụ nwa m nwanyị, anyị kpọtụụrụ mama m ka ọ gwa ya mana ọ kpọchiri ekwentị ozugbo ma achọghị ịma banyere ya. Gụ ihe ndị ị kwuru na nso nso a, ụfọdụ ndị kwuru na mụ na ezinụlọ m kwesịrị ịkpọtụrụ TB Joshua.
Na 2013, enyere m nne m ego ka o wee nwee ike ịkpọtụrụ ya na Nigeria. Okwesịrị ka ọ nọọ izu 1; ma ụbọchị abụọ ọ nọrọ, enwetara m oku na-asị na ọ lara.
Ewezuga ihe niile m nyekwara nne m nnukwu ego iji malite azụmahịa nke kuki na ihe dị iche iche. Dị ka o kwesịrị ịdị, m kwere ka ha tinye aha m na foto ha ka ha wee nwee ike ree karịa. Kedu ihe ọzọ nwa nwoke nwere ike ime iji kwado ezinụlọ ya?
Afọ ole na ole gara aga, azụrụ ụlọ na East Lagon (Ghana) $ 1.2 nde. Achọpụtara m na ọ dị mma ịhapụ nwanne m nwanyị nke tọrọ m, bụ Yabo Adebayor n'ụlọ ahụ. M kwekwara ka m ọkara nwanne nwoke (Daniel) ịnọ n'otu ụlọ.
Ọnwa ole na ole ka e mesịrị, anọ m ezumike ma kpebie ịga n'ụlọ ahụ. Iji ihe ijuanya m, ahụrụ m ọtụtụ ụgbọ ala n'okporo ụzọ. N’ezie, nwanne m nwanyị kpebiri ịgbazite ụlọ n’ejighị m. Ọ chụpụkwara Daniel n’ụlọ ahụ. Rịba ama na ụlọ ahụ nwere ihe dị ka ime ụlọ 15.
Mgbe m kpọrọ ya ma rịọ maka ihe nkọwa, o weere ihe dịka 30 iji mee mkparị na mkparị m na ekwentị. Agwara m mama m ịkọwa tọ na ọnọdụ na ya mere otu ihe ahụ dị ka nwanne m nwaanyị. Otu nwanna nwanyị a kwuru na enweghị m ekele. Jụọ ya banyere ụgbọ ala ọ na-anya ma ọ bụ ihe ọ bụla ọ na-ere taa?
Nwanne m nwoke Kola Adebayor, anọla na Germany maka afọ 25. Ọ laghachiri n'ụlọ banyere oge 4, na-akwụ m ụgwọ. M na-ekpuchi ụgwọ niile agụmakwụkwọ ụmụ ya. Mgbe m nọ na Monaco, ọ bịakwutere m rịọ maka ego iji malite azụmahịa. Naanị Chineke maara ole m nyere ya. Ebee ka azụmahịa ahụ dị taa?
Mgbe nwanne anyị nwoke bụ Peter nwụrụ, ezitere m Kola nnukwu ego ka o nwee ike ịlaghachi n'ụlọ. Ọ bịaghị mgbe e liri ya. Taa nwanne ahụ (Kola) na-agwa ndị mmadụ na m so na ọnwụ Peter.
Kedu? Ọ bụ otu nwanne nwoke ahụ gara kọọrọ akụkọ ezighi ezi banyere ezinụlọ anyị "Sun" na ndị ọzọ iji were ego. Ha zigakwaara m Club m akwụkwọ ozi mgbe m nọ na Madrid ka m nwee ike chụọ n'ọrụ.
Mgbe m nọ na Monaco, echere m na ọ ga-adị mma inwe ezinụlọ nke ndị na-agba ụkwụ. N'ihi ya, m hụrụ na nwanne m nwoke Rotimi na-abanye n'ụlọ akwụkwọ football na France. N'ime ọnwa ole na ole; site n'egwuregwu 27, o zuuru 21 igwe.
Agaghị m ekwu ihe ọ bụla gbasara nwanne m nwoke bụ Peter Adebayor n'ihi na ọ nọghị ebe a taa. Ka nkpuru-obi-ya zuru ike n'udo.
Nwanne m nwanyị bụ Lucia Adebayor nọgidere na-agwa ndị mmadụ okwuna papa m gwara m ka m kpọga ya na Europe. Ma olee ihe ga-abụ ebumnuche nke ịkpọbata ya Europe? Kwa ogee bụ maka ihe kpatara ya.
Anọ m na Ghana mgbe m natara ozi banyere nwanne m nwoke Peter na-arịa ọrịa. Akwọọrọ m ụgbọala kachasị ọsọ m nwere ike ịbanye Togo iji zute ya ma nyere aka. Mgbe m rutere, nne m kwuru na enweghị m ike ịhụ ya na m kwesịrị inye ego na ọ ga-edozi ihe niile.
Naanị Chineke maara ole m nyere ya n’ụbọchị ahụ. Ndị mmadụ na-ekwu na anaghị m eme ihe ọ bụla iji zọpụta nwanne m nwoke, Peter. Enwere m nzuzu ịkwọ ụgbọala 2 awa Togo n'efu.
M haziri nzukọ na 2005 iji dozie nsogbu ezinụlọ anyị. Mgbe m jụrụ ha banyere echiche ha, ha kwuru na m ga-ewuru onye ọ bụla n'ime ezinụlọ ụlọ ma nye onye nke ọ bụla ụgwọ ọnwa.
Taa, m ka dị ndụ ma ha eburu ihe niile m nwere, ọ bụrụ na m nwụọ.
N'ihi ihe ndị a nile, ọ dị m ogologo oge ka m guzobe ntọala m n'Africa. Oge ọ bụla m na-agbalị inyere ndị nọ ná mkpa aka, ha ga-ajụ m ajụjụ, ha niile chere na ọ bụ ihe ọjọọ.
Ọ bụrụ na m na-ede ihe a, ebumnuche bụ isi abụghị ka m mata ndị ezinụlọ m. Achọrọ m ka ezinụlọ ndị ọzọ dị n'Africa mụta ihe na nke a. Daalụ."
Emmanuel Adebayor mmadu:
Emmanuel Adebayor nwere àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike: Adebayor nwere ọmịiko, nkà, nke a na-ahụchaghị na onye maara ihe.
Ajọ: Adebayor nwere ntụkwasị obi zuru ezu.
Ihe Adebayor nwere mmasị: Ihi ụra, egwu, mmekọrịta ịhụnanya, mgbasa ozi a na-ahụ anya, igwu mmiri na isiokwu ime mmụọ
Ihe Adebayor achọghị: Mara ya-mmadu niile, na a na-akatọ ya, oge gara aga na-alọghachi na-ezute ya na obi ọjọọ nke ụdị ọ bụla.
N'ikwu ya, Adebayor anaghị achọ ọdịmma onwe ya ma na-adị njikere mgbe nile inyere ndị ọzọ aka, n'enweghị olileanya na ihe ọ bụla gaghachi azụ.
Emmanuel Adebayor Juju Akụkọ nke:
Akuko ukwu sitere na mgbasaozi British na-egosi na Adebayo na-agbazi nne ya, Alice, ma na-ebo ya ebubo banyere ụdị amoosu nke metụtawo ọganihu ya.
O juru ụwa anya ma ọ bụghị ihe ihere nye nwoke a na-egwuri egwu na Arsenal, Manchester City, Real Madrid na ugbu a Tottenham na onye, ​​na-aga site na afọ ya, kwesịrị ịdị na-ebelata akara ya.
Mana ndị nwoke ahụ mere ka o kwenye na nne ya nwere ọrụ. O boro ya ebubo n’ihu ọha. Ọ tinyela ihe mgbaru ọsọ abụọ na ọpụpụ 12 maka Tottenham tupu ya agaa ebubo ya.
Nwanne m nwoke ka a na-eme ka ọ bụrụ ụbụrụ -Kola Adebayo nwanne ya nwoke kwuru na 2015. Kola, 42, onye na-anya gwongworo na Germany aghaghị ịgbagha mgbasa ozi na Europe iji kwaa mmakwaara na emmanuel amawo ụbụrụ "Muslim pesfas ndị gwara ya na nne anyị n'azụ ya enweghị ike akara ihe mgbaru ọsọ."
Kola kwuru na ọ bụ ihe ijuanya na Emmanuel kwenyere na ha. Kama Adebayo na-agbasi mbọ ike ịlaghachi n'ụdị ahụ, o kwere ka ụjọ nke ịta amoosu merie ya.
Ọ gara n'ihu…Adebayo adịghị egwu egwu, ihe mgbaru ọsọ ndị ọzọ. Ọ na-arụsi ọrụ ike n'ịlụso mmụọ mgbagwoju anya anya karịa ịbịghachi ịkpụghachi ma buru ebe ọ nọ. Mwakpo a na-ebuso mmụọ ndị ahụ agha bụ ego ọ na-efu.
Emmanuel Adebayor onyinye onyinye Africa:
Akpọrọ onye nyere onyinye a nke kachasị mma n'Africa maka 2008 na ememme onyinye nke Confederation of African Football (CAF) kwadoro. Adebayor meriri ndị ahọpụtara aha ya bụ Mohamed Aboutrika nke Egypt na Michael Essien nke Ghana na ntuli aka nke hụrụ ndị nkuzi otu egwuregwu nke ndị otu CAF si mba 54.
Nne ya soro ya n'ememe onyinye a, ebe o natara crystal trofi na onyinye $ 20,000. Ọ bụ onye egwuregwu Togo nke mbụ ka amata dịka onye ọkpụkpọ kacha mma n'Africa.
Emmanuel Adebayor Cargbọ ala:
Ọ bụ mgbe ọ kasị bụrụ ọgaranya na Africa. N'ihe dị ukwuu n'aka ego, ọ na-eme ihe ọ kacha mma. Ịzụta ụgbọala dị oké ọnụ dịka egosiri n'okpuru.
Emmanuel Adebayor Chefuru ịgbanyụ ekwentị ya:
Adebayor nwere ike ịtọghe ya ma na-eme ihe. Ọ bịara na BBC na Japan na Cameroon football egwuregwu na-enweghị icheta imechi ma ọ bụ tinye ekwentị ya na nkịtị mgbe ikuku.
Na Jenụwarị 2010, Adebayor bụ otu n'ime ndị egwuregwu ahụ mgbe bọmbụ otu Togo bịara na egbe egbe n'ụzọ 2010 Africa Cup of Nations na Angola.
Adebayor nọ na-ese onyinyo oge ịkwa ákwá mgbe ọ lanarịrị ndị na-eyi ọha egwu na Angola na-agba ọsọ gaa na 2010 Africa Cup of Nations. Mwakpo ahụ hapụrụ onye ọkwọ ụgbọala ahụ na otu onye òtù Togo nke football na-ahụ maka ya na ndị ọzọ isii merụrụ ahụ. Ọhụụ Adebayor anwụghị.
Na 2013, Adebayor laghachiri otu Togo maka 2013 African Cup of Nations na South Africa, ebe o nyeere ha aka iru eru maka nkeji iri na ise. Ugbu a ọ bụ Togo kachasị nwee goolu na goolu 31.
Emmanuel Adebayor Untold Biography Eziokwu - Onye Na-enye Ihe:
Adebayor bụ onye inyeaka dị ike n'obodo ya nke dị n'Africa. N'okpuru ebe a bụ foto nke ọ na-akwụghachi na ọha mmadụ.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Emmanuel Adebayor Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị!.
Ụwa a dị mfe ma dị ize ndụ n'ihi nà anyị bụ mmadụ bụ ụgwọ. ma ị na-eme ihe ọma ma ọ bụ dị njọ, a ga-akatọ gị, jigide ụgbọelu gị. Ị bụ onye a gọziri agọzi